Caafimaadka in la isku galmoodo - iftineducation.com
iftineducation.com – Noocyada galmada
Si carruur loo dhalo waa in la isu galmoodaa.
Galmo waxaa loola jeedaa in gus la geliyo siil.
Waxayna qayb dabiici ah ka tahay noloshada galmada ee dad badan.
Galmada noocan ahi waxay ka mid tahay waxyaalaha muddo kaddib yimaada.
Waxaa caadiyan dhacda in lays taataabto oo lays fareeyo – oo unugyada taranka la taataabto ama siilka la fareeyo – ka hor intaan caadi laysugu galmoon.
Daawo filimka Qof da’ yar oo gudan si aad u aragtid sida uu u eg yahay unugga taranka ee dumarka riix halkaan
Waxyaalaha laga aamminsan yahay (quraafaad) galmada iyo dahaarka unugga taranka (skjedekransen) (xuubka bikrada)
Quraafaad badan ayaa galmada laga aamminsan yahay. Mid ka mid ah waxyaalaha caadiga ah ee la aamminsan yahay ayaa ah in uu unugga taranku leeyahay xuub bikro kaas oo dillaaca marka ugu horreeya ee gabadha loo galmoodo, dabadeedna uu dhiig ka yimaado. Xuub kuma yaallo gudaha unugga taranka ee dumarka. Laakiin billowga unugga taranka ee dumarka waxaa ku yaalla laab ah halka siilku ka billowdo. Waxaa loogu yeeraa dahaarka unugga taranka. Kaasi ma aha mid dillaaci karaa ama «la duleelin karo «, suurtagalna ma aha in la arko in ay gabari bikro tahay iyo in kale. Mar kastana dhiig ma yimaado marka ugu horreysa ee gabadha loo galmoodo. Daawo filimka Qof da’ yar oo gudan si aad u aragtid waxa berigi hore loogu yeeri jiray xuubka bikrada – haddana loogu yeero dahaarka unugga taranka.
Siyaalo kale duwan oo loo arko galmada
Dadku way ku kala duwan yihiin sida ay u arkaan galmada oo qofba waa si. Dadka intooda badan marka ay weynaadaan galmo way sameeyaan, iyaga oo xataa u samaynaya sababo kale oo aan ahayn in ay uur yeeshaan. In galmada wax wanaagsan loo arko waxay kordhisaa farxadda iyo dareenka laga helayo nolosha galmada. Muhiimadda ay galmadu dadka u leedahay qofba waa si wayna kala duwan tahay wejiyada kala duwan ee nolosha. Dadka qaar baa jecel in ay isu tagaan keliya qof ay is qabaan waana galmada kaliya oo xalaasha sharciga ah diinta islaamka.
laba aan isqabin hadey isu galmoodaan waxa loo yaqaanaa xina ciqaab ayay muteysanaayaan hadii lisku arko marqaatina loo helo sharciga islamka abaa
Xadka iyo in galmo la diido
Waa muhiim in aad ogaato in qofka kale doonayo in uu galmo kula sameeyo. Markaas ayaad noqonaysaa qof daryeel iyo ixtiraam u haya kan aad dooneyso in aad galmada la samayso. Dad badan ayay ku adag tahay in ay sheegaan meesha xadkoodu maro. Waxaa laga yaabaa in ay ka baqayaan in uu qofka kale iyaga ka xiisa dhaco. Qaarna way ka xishoodaan in ay qofka kale u sheegaan in aanay galmo doonayn ama in ay doonayaan in kondhom la isticmaalo. Waa muhiim in aad sheegto haddii aad galmada dooneyso iyo haddii aadan dooneyn. Haddii uu qofi yiraahdo galmo ma dooneyo waa in aad taa ixtiraamtaa oo aqbashaa.
Adiga wax kaa badiya ma jiraan sida kuu roon
Ma jirto cid jawaab sax ah ka bixin karta sida loo baahan yahay in ay noloshaada galmadu ahaato. Adiga ayaa lagaa rabaa in aad garato sida kuu roon. Adiga oo keliya ayaana ogaan kara waxa saxda kuu ah iyo waxa khaladka kuu ah.
Xaggee laga heli karaa warbixin intan ka badan oo galmada ku saabsan?
Waxaa jira bogag internet-ka ah oo badan oo dhallinyarada loogu tala galay oo xambaarsan warbixin galmada ku saabsan. galmada.net. Barahaan internetka waxaa wax ku qora dad maaddada aqoon u leh oo warbixinta halkaas ku qoran waa mid lagu kalsoonaan karo. Meelo kale oo badan oo internetka ah ayaa laga helayaa warbixin galmada ku saabsan, laakiin lama hubo in warbixinta halkaas ku qoran ay sax tahay. Ha iska rumayn wax walba oo aad internetka ka akhriso.
Da’da ugu hooseysa ee egalmada la oggol yahay – xadka marka qofka loo oggol yahay in uu galmo sameeyo
Da’da ugu hooseysa ee galmada la oggol yahay Norway waa 16 sano. Taas oo micnaheedu yahay in la ciqaabayo qofki ka weyn 16 sano oo galmo la sameeya qof 16 sano ka yar. Sidatan waxaa dhigaya sharciga (Sharciga ciqaabta) waana mid carruurta iyo dhallinyarada looga difaacayo faraxumayn uga timaadda xagga dadka waaweyn. Qofka weyn ayaa mas’uuliyaddu saaran tahay isaga ayaana la ciqaabayaa.
Galmada ka hor inta aan la gaarin 16 sano
Sharcigu wuxuu dhigayaa in ciqaabta laysu ciqaabayo galmo darteed marka aanu qofku gaarin da’da ugu hooseysa ee galmada la oggol yahay, waa layska deyn karaa haddii labada isu galmooday ay isku da’ yihiin. Taas oo micnaheedu yahay in loo baahan yahay in labada qof ee dhallinyarada ah ay yihiin kuwo isu dhow korriin ahaan xag jireed iyo xag maskaxeed labadaba.
Booliska ayaad internetka kula soo xiriiri kartaa haddii aad dooneysid in aad soo gudbiso waxyaalo sharcidarro ah.
Habab uurka looga hor tago oo ammaan ah ayaa jira kuwaas oo suuragelinaya in ay lammaanuhu isu galmoon karaan iyaga oo aan ka baqayn in uur la qaado.